Redmi nwere Snapdragon 855 ga - abata na --enweghị onyonyo akara mkpisiaka ihuenyo Gam akporosis
Xiaomi na-agbasi mbọ ike iji weta ngwaọrụ ọhụrụ ahụ Redmi na Snapdragon 855, nke a ga-akpọ Redmi Pro 2, maka Mee ma ọ bụ June. Tupu ụbọchị a abịarute, ọtụtụ teas si Lu Weibing, onye isi njikwa Redmi, ekpugherela ọtụtụ ihe banyere njedebe dị elu.
Dabere na mkpughe nke ndị isi gosipụtara na Weibo n'oge na-adịbeghị anya, ọ dị ka nke ahụ Redmi nwere ike idebe ihe mmetụta mkpịsị aka na ihuenyo site na ngwaọrụ ahụ. O doro anya na ụlọ ọrụ ahụ ga-ewepụ ụfọdụ atụmatụ iji mee ka ọ bụrụ akụ na ụba.
Lu Weibing zara ya nke ọma ihe mmetụta mkpịsị aka na-egosipụta dị oke ọnụ, mgbe onye ọrụ Weibo jụrụ ya banyere ọnụnọ nke ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ngwaọrụ flagship na-abịanụ. O kwuru na enweghị ihe nkwụnye mkpịsị aka na-egosipụta na ngwaọrụ ọhụrụ.
Na ihe ngosi akara mkpịsị aka akara ngosi bụ ụkpụrụ maka ngwaọrụ flagship niile ugbu a na obere oge. Ọtụtụ ndị na-emepụta ama ama China dị ka Oppo, Vivo, Huawei na ọbụna OnePlus mere ka ụdị mkpọghe a dị mfe maka ndị ọrụ ha. Otú ọ dị, ọ malitewokwa ịpụta na ụfọdụ ngwaọrụ ndị dị ọnụ ala, dị ka Oppo K1.
Akụkọ ndị na-adịbeghị anya na-egosi na Redmi nwere SD855 ga-ebu modul igwefoto gbasasịa nke gụnyere ihe mmetụta 32-megapixel. Na azụ, a ga-enwe modul igwefoto okpukpu atọ nwere igwefoto igwe 48 MP + 8 MP + 13 MP. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-enwe 3.5mm Jack jack na NFC maka ịnyefe nkwụnye ụgwọ nchekwa na ngwa ngwa.
O nwere ike ịbụ ọnụ ala Snapdragon 855 ngwaọrụ na ahịa nakwa na ọ malitere n’oge na-adịghị anya. Anyị nwere olile anya na ozi ndị ọzọ ga-apụta tupu ebido ya n'ezie, ebe onye nrụpụta China amalitela ịkwadebe nnukwu ebuka nke ekwentị iji gboo mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi nwere Snapdragon 855 nwere ike ịpụta na-enweghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ihuenyo
Google Pixels anaghị ere dị ka atụrụ anya